F1: orinasa ny orinasanao? Inona no karazana famonoana otrikaretina vokarina?
Orinasa famokarana ny orinasanay, karazana varotra mafana mamindra otrikaretina dia: famonoana alikaola 75%, gel mpanadio tanana, savony vita amin'ny bakteria, savony fanasan-damba, savony, mpitsabo mpanadio tavoahangy zaza, otrikaina fanadiovana voankazo sy legioma, mpitsimbina sakafo, 84 otrikaretina, famonoana asidra hypochloric, famonoana biby, famonoana formaldehyde, famokarana otrikaina amin'ny fitomboan'ny zavamaniry, fanovana ny kalitaon'ny rano, fanesorana ny harafesina, fanemorana mihelina, rano beriberi, rano fantsika volondavenona, ranon-javatra fandroana bubble, famafazana tonika volo, tsiranoka fanapahana vy, detergant menaka mavesatra, ion ratsy rano sns.
F2: mamafa inona daholo ny karazana mamafa?
Afaka mamokatra tondra-dronono alikaola 75% isika, soloina alikaola, pad alikaola, soloina fanadiovana sterilisa, solo-jaza, solo-dakozia, famafazana biby fiompy, solo-telefaona finday, famafana solomaso, famafana taraiky, soloina indostrialy sns. Afaka mamokatra kitapo 1, kitapo 10, kitapo 20, kitapo 30, kitapo 40, kitapo 50, kitapo 60, kitapo 80, kitapo 100, afaka mamokatra 60 barika koa, 80 barika, 100 barika , 160 barika, 800 barika, 1200 barika, Azo haingoina manokana ihany koa ny famokarana arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
F3: inona avy ireo karazana fanafody sy fitaovana fitsaboana?
manondrana maska ​​fitsaboana azo ovaina indrindra izahay, saron-tava fandidiana ara-pitsaboana, saron-tava fiarovana ara-pitsaboana (N95), akanjo fiarovana ara-pitsaboana, fitafiana mitoka-monina, fitafiana fandidiana fitsaboana, fonon-tanana fanadinana fitsaboana azo ampiasaina, fonon-tànana fandidiana ara-pitsaboana, kapila fitsaboana, solomaso fitokana-monina ara-pitsaboana, fitokana-monina ara-pitsaboana. saron-tava, fonosana kiraro miaro, thermometre amin'ny handrina infrared, sns
F4: ny fihenan'ny alikaola amin'ny famonoana otrikaina alikaola sy ny gel tsy otrikaina? Ny alikaola ampiasaina?
Ny ankamaroan'ny fanafody famonoana otrikaretina alikaola sy gel tsy misy fanasan-damba dia alikaola 75% (étanol), ary azo amboarina ho vokatra mitambatra miaraka amin'ny taham-pahavitrihana avo lenta arak'izay takian'ny mpanjifa. Ny alikaola ampiasaintsika dia 75% naoty sakafo.
F5: inona ny loko misy ny savony amin'ny savony manohitra ny bakteria? Afaka manao sombin-javatra ve ianao?
Ny loko dia mety mifanaraka amin'ny fitakian'ny mpanjifa, ny mpanjifa amin'ny ankapobeny dia maniry ranon-javatra mangarahara, azo atao manga, mavokely, maitso, mavo ary ranon-javatra mangarahara hafa koa. Ny savony tanantsika miady amin'ny bakteria dia azo zahana ho busa.
F6: ny sanitiser fanasan-damba no tena mampiditra azy? Misy tombony ve ny vidiny?
mpiorina lehibe indrindra dia p-chloro-xylene phenol, mitovy amin'ny formula DETTOL, saingy mora ny vidinay.
F7: ny fanasana vava, ny mpanadio tavoahangin-jaza, ny otrikaretina fanadiovana voankazo sy legioma, fitehirizana sakafo dia misy fahasosorana amin'ny vatan'olombelona?
Ny singa lehibe indrindra dia ny rano anion voajanahary, izay avela elektrika amin'ny rano madio mankany amin'ny zezika avo lenta. Izy io dia manana fahaizana manadio osika mahery sy tahan'ny bakteria, ary tsy misy mahasosotra ny vatan'olombelona ary tsy manana fady.
F8: Inona no vokatry ny vokatra ho an'ny olon-dehibe?
Ny singa lehibe indrindra dia ny ahitra voajanahary, miaraka amin'ny permeabilité mahery, afaka miditra amin'ny hoditra mankamin'ny hozatra epidermaly, vokany haingana, ny zava-dehibe indrindra nefa tsy misy fanentanana sy voka-dratsy eo amin'ny vatan'olombelona.
F9: inona ny firafitry ny famafana lena? inona no fiasa sy famonosana solo-drano lena azonareo rehetra atao?
Ny famaohana lena dia famoahana misy rano, amin'ny alàlan'ny lamba tsy tenona toy ny fitaterana, arakaraka ny fiasa sy ny fampiasana ny samy hafa, manampy ranoka samihafa. Ny orinasanay dia manana ekipa R & D biokimika matanjaka, araka ny fepetra takian'ny mpanjifa, ny fanomanana ranon-javatra mahomby mba hahatratrarana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Ny fonosana dia afaka manamboatra karazana harona, barika, boaty na isan-karazany arak'ireo mpanjifa.
F10: manolotra serivisy fanomezana fahazoan-dàlana ianao? Misy baiko farafahakeliny?
Eny, manolotra serivisy momba ny fahazoan-dàlana izahay. Ny kaonty kely indrindra dia kaontenera 20 GP.
Q11: ny vokatra avy amin'ny orinasanao dia afaka mameno ny lalàna momba ny fanafarana sy fanondranana?
Amin'izao fotoana izao, ny vokatray dia amidy amina firenena maro, ny FDA CE MSDS anay ary ny mari-pankasitrahana mampidi-doza dia tena feno, noho izany aza manahy momba ny fitaterana sy ny fadin-tseranana, ny antsipiriany misimisy kokoa, mifanakaloza hevitra miaraka amin'ny mpitantana orinasa.
F12: afaka mividy kely ve isika?
Eny, ny mpamatsy rehetra dia kely sy lehibe, ny fifanakalozana eo amin'ny roa tonta koa dia avy amin'ny kaontim-pitsarana marobe hatramin'ny ambongadiny maro, vonona izahay hiara-hiasa akaiky amin'ireo mpamatsy manerantany hiara-hitombo.
F13: afaka mividy be dia be ve isika?
Mazava ho azy, aza manahy momba ny fahaizantsika. Ny karazany tsirairay avy amintsika dia afaka mamokatra tavoahangy (kitapo) hatramin'ny 100000+ isan'andro, izay azo omena amin'ny habetsahana betsaka.
F14: Mandra-pahoviana no azo alefa?
Miankina amin'ny habetsahan'ny baikonao izany. Raha mila tsipiriany misimisy kokoa dia miresaha amin'ny mpitantana orinasa.